Ngaba i-Brenton Harrison Tarrant ihlasela ukuqaliswa kwesigebengu se-anti-Turkey? : UMartin Vrijland
Ngaba i-Brenton Harrison Tarrant ihlasela ukuqaliswa kwesigebengu se-anti-Turkey?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	17 Matshi 2019	• 10 Comments
Ukuba kufuneka sikholwe ngeendaba ezizayo malunga neBrenton Harrison Tarrant uya kuyenza uhambo oluyimfuneko ababonakala bengakumbi kwizendalo. Ukuxhaswa kohambo lwakhe kwakuza kuvela kwi-Bitconnect eyimali-mali eyimali-mali. Oko kuvezwa njenge-alibi ethembekile. Okokubetha ngokukodwa yimibiko yokuba i-Tarrant ibonakala ifuna ukulwa nokuvuka koBukhosi base-Ottoman. Kuthetha ukuba u-Tarrant uye watyelela eTurkey nasePakistan; Amazwe amabini anxulumene ngokusondeleyo kwimigaqo-yenkolo. Ikhonkco kunye ne-Anders Breivik yenziwe. Imithombo yaseBulgaria yatsho i-New Zealand Messenger ukuba imibhalo yezixhobo ezifunyenwe zibhalwa kwisiCyrillic. Ezi tekisi ziza kubonisa amagama eemfazwe ezidumileyo kunye namanani eembali ezivela eBalkans. Ezi zilwa zilwa noMbuso wase-Ottoman. Imfazwe ngokumelene namaTurkey ase-Ottoman nawo yayisisiseko somphekula we-Norwegian Anders Breivik.
Kubonakala ngathi ukuxabana phakathi kwe "maKristu" namaSulumane kuya kuphakama ukuya kwiindawo eziphakamileyo. Ngoko andiyikumangaliswa ukuba sibone ukunyuka ngokukhawuleza kokuphekula kwamaphiko e-Europe nase-US. Gcina ukhumbule ukuba oku kusenokwenzeka ukuba yinto yokusebenza engaphantsi komhlaba apho iinkonzo zamfihlo ziphinde zakha iqela labo loyiko. Ndiyakrokra ukuba kuya kubakho unxibelelwano kunye noFethullah Gülen (okhethwe yiTurkey njengeqela le-FETO loyiko). Ndiyakrokra ukuba siya kubona iingxelo zexesha elifutshane ukuba i-Tarrant iye yaququzelela iintlanganiso zokubeka isiseko sale seli zongcipheko. Kungenzeka ukuba uxhulumaniso lweBalkan luya kwenziwa kwixesha elidala - Yugoslavia imfazwe ehlobene - AbaseSerbia (intshaba ye-Ottoman). Oku kunokuthetha ukuba siza kubona ezinye ezinjalo (ngombono wami we-PsyOp) ukuhlaselwa kwiithagethi ze-Islamic (kwaye ngokukodwa iTurkey).
Funda ngasemva nje apha kutheni kwimeko yam siphinde sisebenzisana ne-PsyOp (ukusebenza kwengqondo).
Konke oku kubeka isiseko seYurophu esilindele ixesha elide laseYurophu. Ukuba siza kufakazela ukuphakama kwamacandelo ama-Christian-basedist amaqhinga aphakanyisiweyo, kunye nekhonkco iyenziwa kunye neSerbia kunye ne-FETO, ngoko ke lowo u-Erbiogan olungeleyo ukuza eYurophu. Ndakuxela oku ngenxa yokuba inxalenye yeskripthi apho ndathi ubukhosi base-Ottoman buya kubuyiselwa i-2023. Esi sibhalo sidibana neziprofeto zonqulo size sihlangabezane nencwadi evela kwi-1871, kwi-33e degree yeScottish Ride Freemason u-Albert Pike kwiqabane lakhe uGiuseppe Mazzini, apho waxela kwangaphambili iimfazwe zehlabathi ezintathu. Ezi zimbini zokuqala kwezi zibhalwe kwaye zazisetyenziselwa ukuseka ilizwe likaSirayeli. Imfazwe yehlabathi yesithathu iya kuba malunga neYerusalem kwaye iya kwenzeka phakathi kwehlabathi lamaSulumane kunye neentsikelelo zelizwe leZiyon. Kufuneka ucinge ngolu hlobo lomzabalazo phakathi kobukhosi base-Ottoman kunye ne-Israel kunye ne-US. Uya kufumana ukuxhaswa okubanzi kwento yam yokuvuswa koBukhosi base-Ottoman eli nqaku. Kwimeko yokuqonda okungcono imicimbi ekhoyo ngoku, kubalulekile ukuba uqaphele oku. Ngoko funda loo ngcaciso ngokucophelela.
Makhe silinde imilayezo kusondeleko, kodwa ukuba siza kubona ukutshatyalaliswa kweentlanzi kunye neentlanzi ezilungileyo ngokukhawuleza kubonakala zihlelwe kakuhle ukuba zivele njengomtyholi ephuma ebhokisini, khumbula kwakhona oku kwangaphambili.
Funda ngaphakathi eli nqaku indlela onokufunda ukuyibona ngayo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: rt.com
Ukuhlaselwa kweNew Zealand: ukusekwa ngokuchanekileyo kokucandwa kwehlabathi lonke, ukungaxhatshazwa kwabantu kunye nokuhlengahlengiswa
Isingqungquthela se-NATO: uxolo lweendaba malunga neengxabano ezibangele ukungenelela kwe-Turkey kwi-EU
Ukususela ngoku kwimbali yeTurkey ye-Atatürk kwizikolo zaseDutch: kuba i-EU iza kuqukwa ngokukhawuleza ngama-Ottomans
Imifanekiso yevidiyo yebhalothi yeBrenton Tarrant (ukusasaza bukhoma) I-Christchurch eNew Zealand
Siza kuqala! I-2019 eyonwabileyo nephilileyo kubo bonke abafundi!
tags: olwaziyo, Bitconnect, Brenton, kakhulu, eziziimbalasane, FETO, Harrison, Ottoman, kunene, sityebi, I-Tarrant, ulwabilo, turkey
17 Matshi 2019 kwi-00: 57
"Siyazi kwakhona ukuba uye kwiindawo ezininzi zokuqala zobuKristu kunye namaziko eTurkey," u-Erim uthe, wongezelela ukuba kwi-manifesto ucinga ukuba uthumele i-intanethi, utsho uHagia Sophia.
UHagia Sophia njengamanje umosheki ophawulekayo waguqula iimyuziyamu e-Istanbul, ngaphambili eyayingumfundisi we-Orthodox ongumKristu we-Patriarchal kuze kube ngu-1453 xa ubukhosi base-Ottoman buyisa i-Istanbul.
17 Matshi 2019 kwi-00: 59
AmaSerbia avela kwimvelaphi yamaGrike yamaOthodox kwaye sinako (mhlawumbi) silindele ukuba unxibelelwano luya kwenziwa ngeSerbia.
Gcina usuku lwe-29 ngoMeyi-umhla wokuwa kweConstantinople kwi-1453; ukuthinjwa kweConstantinople ngama-Ottoman. Ukuphela koBukhosi baseByzantine
Ngaba sinokulindela ukuhlasela kwamaphekula okwenene e-Istanbul (owayengaphambili eConstantinople)?
17 Matshi 2019 kwi-01: 04
Ulwaphulo-mthetho olunene luyakuthi ludibaniswe neTurkey kuDonald Trump, kuba wenqaba ukukhupha i-Fethullah Gülen.
Ngale ndlela inxibelelwano phakathi kweTrump, i-right ephezulu kunye neyoku (elawulwayo) enye imidiya (njenge-Infowars, i-Alex Jones, njl. Njl) nayo ingenziwa kwaye inkabi inokuqhutyelwa ngokuqinisekileyo kumajelo endala kunye nomyalelo wezepolitiki endala. Ulwaphulo-mthetho nolwagxeko lwamajelo kunye neengxelo zokuhlaziywa kwembali "ezingapheliyo" zijongene nazo.
Yiloo nto yokuqala kwendlela yokuphendula.
hayi wabhala wathi:
18 Matshi 2019 kwi-23: 49
Kwakukho ividiyo kwi-Facebook eyafakwe kwinqwelo yomenzi wobubi. Ingoma yaseSerbia echukumisayo edlala kwirediyo.
18 Matshi 2019 kwi-23: 53
Ngaba unayo ikhonkco kule vidiyo?
19 Matshi 2019 kwi-17: 29
Kwakuyindlela yokuphila, kodwa i-Youtube ibonakala iyisusile ividiyo (inxalenye yokugxeka ...?)
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM wabhala wathi:
17 Matshi 2019 kwi-02: 44
Indawo yokugqibela yokuma!
17 Matshi 2019 kwi-14: 54
Ukuhamba ngeendlela eziqonda ukuba i-Tarrant iqeqeshiwe ngokusemthethweni kwi-2017 ne-2018. Ukuqagela kathathu kweliphi ilizwe?
17 Matshi 2019 kwi-18: 46
@ Sunshine. Iinkcukacha ngomthombo nceda. Iingcebiso ezibandakanyekanga ezingaphendulwayo ezibizwa ngokuba yimpendulo yeempendulo zincinci.
30 Matshi 2019 kwi-15: 33
« Imifanekiso yevidiyo yebhalothi yeBrenton Tarrant (ukusasaza bukhoma) I-Christchurch eNew Zealand
Ukuhlaselwa kweNew Zealand: ukusekwa ngokuchanekileyo kokucandwa kwehlabathi lonke, ukungaxhatshazwa kwabantu kunye nokuhlengahlengiswa »
Iindwendwe ezipheleleyo: 11.619.608
Ngaba kuya kubakho iintloko kwiqonga likaJeffrey Epstein?
Iforamu eqikelelweyo yeDemocracy (FvD)
Iyingozi kangakanani i-5G kwaye ifakwe ngasese njani
Umnyama umela inkolo ethandabuzayo ngelixa abaxhasi becinga ukuba balwela 'iyantlukwano nokubandakanywa'
Kutheni le nto i-transgender iba yinto eqhelekileyo kule nkulungwane ye-21 kwaye inyani inyamalala
UWilfred Bakker op Iforamu eqikelelweyo yeDemocracy (FvD)
Ikhamera 2 op Iforamu eqikelelweyo yeDemocracy (FvD)
bartelo op Umnyama umela inkolo ethandabuzayo ngelixa abaxhasi becinga ukuba balwela 'iyantlukwano nokubandakanywa'
Danny op Iyingozi kangakanani i-5G kwaye ifakwe ngasese njani
Joyina amanye ama-1.614 ababhalisile